नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राजधानी काठमाडौंमै सिटामोलको अभाव रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता रावलले सिटामोल अभाव हुनुको कारण समेत खोजेका छन् ।
नेता रावलले लेखेका छन्, ‘जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान नदिई अ‍ौषधोपचारको व्यवस्था कमजोर भएकोमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्दा ‘जनताले सिटामोलसम्म पाएका छैनन्’ भनी दलका नेता र कार्यकर्ताले भाषण गर्दै आएका हुन् । अहिले अन्त त के काठमाडौंमा नै सिटामोलको अभाव छ । यो सरकारको अयोग्यता हो कि यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ ?!’
कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला बजारमा सिटामोलको अभाव भएको गुनासो जनस्तरमा समेत हुँदै आएको छ ।
ललितपुरको मतगणनास्थलमा किन पुगे बालेन ? [भिडियाे]
काठमाडौं महानगरका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह प्रतिनिधिको रूपमा ललितपुर महानगरको मतगणनास्थल पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरको मगणनामा अग्रता कायम गरेका बालेन्द्र साहले ललितपुरका मेयरका उम्मेद...
जुम्लाको चन्दननाथको मेयरमा राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार राजुसिंह कठायत विजयी भएका छन् । कठायतले २४ सय ३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका पदमबहादुर श...
काठमाडौं अपडेटः बालेन ८ हजार ४० मतले अगाडि
काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले ८ हजार ४० मतको फराकिलो अग्रता बनाएका छन् । ४२ हजार ५६९ मत गन्दा बालेनले १६ हजार ६४७ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी न...
पाल्पाका १० मध्ये ९ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा एक स्थानीय तहको मतगणना भने स्थगित छ । रम्भा गाउँपालिकामा शनिवारदेखि स्थगित मतगणना बुधवार दिउँसोसम्म पनि शुरू हुन नसकेको हो । रम्...
काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । बालेनले १६ हजार ५७९ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले ८ हजार ५७३ मत पाए...
विराटनगर महानगरपालिकामा हालसम्म ४४ हजार ५६८ मत गणना भइसकेको छ । गणना भएकोमध्ये कांग्रेसका नागेश कोइरालाले सबैभन्दा बढी मत ल्याएका छन् । कोइरालाले १४ हजार ६१ मत ल्याउँदा एमालेका सागर थापा...
टर्कीले नेटोसमक्ष राख्यो यस्तो माग